कहाँबाट आयो देउवाका सञ्चारमन्त्रीको ६१ करोड कालोधन ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	कहाँबाट आयो देउवाका सञ्चारमन्त्रीको ६१ करोड कालोधन ? » Nepal Fusion
कहाँबाट आयो देउवाका सञ्चारमन्त्रीको ६१ करोड कालोधन ?
२०७६ साउन २ गते बिहिवार
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको खातामा एकाएक ६१ करोड रुपैयाँ डिपोजिट भएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । महाबौद्धमा रहेको प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बस्नेतको खातामा ६१ करोड कालो धन फेला परेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको निगरानी बढेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि सहकारीमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस्ता ठूला कारोबारको निगरानी हुन थालेको हो । बस्नेताको खातामा एकाएक ६१ करोड निक्षेप राख्नेवित्तिकै त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पुगेको थियो ।
विभागका अनुसार बस्नेतको ६१ करोडको स्रोत खुलेको छैन । विभागले उक्त सहकारीमा रहेको बस्नेतको ६१ करोड ‘फ्रिज’ गरेर अनुसन्धान थालिसकेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बस्नेतको कर छलीबाट आएको रकम जम्मा भएको देखिएको छ ।
नेता बस्नेतको चीनसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीसँग राम्रै हिमचिम छ । उनी सिन्धुपाल्चोकका पूर्वसांसद हुन् । पूर्वसञ्चारमन्त्री हुँदा विभिन्न नियुक्तिमा बस्नेतले राम्रै आर्थिक लाभ लिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
बस्नेत केही समयअघि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकका सञ्चालक समेत थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन भएर आउँदा संवैधानिक पदमा बसेकाहरु सञ्चालन हुन नपाउने व्यवस्था भएपछि उनले राजीनामा गरेका थिए ।
बस्नेतको कालोधनका बारेमा शुद्धीकरण विभागका साथै सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले पनि काम गरिरहेको बुझिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको निकाय हो । विभागले कसलाई कारबाही अगाडि बढाउने भनेर सोझै प्रधानमन्त्रीको राय लिन्छ । बस्नेतको ६१ करोडको स्रोत नखुलेको पैसाका बारेमा उनका परिवार र नातेदारमा पनि अनुसन्धान तीव्र पारिएको विभागले जनाएको छ ।